कतारबाट स्वदेश फर्कनका लागि प्राथमिकता निर्धारण – RemitKhabar
कतारबाट स्वदेश फर्कनका लागि प्राथमिकता निर्धारण
काठमाडौं । कतारमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने काम निरन्तर चलेको छ । कतारस्थित नेपाली दूतावासले मार्च २ सम्म रोजगारी सकिएका व्यक्तिहरूको नामावली प्रकाशन गरेको छ । त्यसमध्ये धेरैजसो नेपाल फर्किसकेका छन् । बाँकी रहेकाहरूको प्राथमिकताका आधारमा नामावली प्रकाशन गर्ने जनाइएको छ ।
आफन्तको मृत्यु भई काजक्रियाका लागि नेपाल जानुपर्नेहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ बाहेक अन्य कारणले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका र सुत्केरी तथा गर्भवती महिलासँगै बालबालिकालाई पनि पहिलो प्राथमिकतामै राखिएको दूतावासले जनाएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका र अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी प्राथमिकताको सूचीमा छन् । पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा आएका बाहेक कतार आई भिसा समाप्त भएका वा आई. डी. रद्द भएका, श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका र वार्षिक र बेतलबी बिदामा रहेकाहरूलाई अर्को महत्त्वपूर्ण सूचीमा राखिएको दूतावासले जनाएको छ ।
कतारमा रहेका नेपालीलाई कुनै समस्या परेमा दूताबासको हटलाइन नम्बर ४४६७५६८१ सम्पर्क गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक दूतावास हरेक आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म खुला रहने जनाइएको छ ।